Infographic: Matekisheni matsva Ari Kuonekwa Kuendesa Retail Kukura NeGoogle Ads | Martech Zone
Muchidzidzo chayo chegore chegumi nezvekushanda kwemaindasitiri muGoogle Ads, Sidecar inokurudzira kuti e-commerce vatengesi vafungisise mazano avo uye vawane chena nzvimbo. Iyo kambani yakaburitsa kutsvagurudza mune yayo 2020 Benchmarks Chirevo: Google Ads muRetail, kudzidza kwakazara pamusoro pechikamu chevatengesi muGoogle Ads.
Zvakawanikwa naSidecar zvinoratidza zvidzidzo zvakakosha zvevatengesi zvekutarisa mukati me2020, kunyanya pakati penzvimbo yemvura inogadzirwa neECVID-19 kubuda. 2019 yaive yakakwikwidza kupfuura nakare kose, asi vatengesi vakakwanisa kubudirira kuwana mari nekushanduka kune mamiriro ekunze, vachitarisana nezano ravo revateereri, uye nekuisa pamberi kuwedzera kwekuwedzera, zvichipesana nekuwedzera kukuru. Iyo mhasuru yekuchinjika ndiyo kiyi yekuchengetedza mabhizinesi kufamba uye kutsigira vatengi munguva yese yekusagadzikana.
Mike Farrell, Mukuru weDhijitari Akabatanidzwa Dhijitari kuSidecar
Zvinhu Zvakakosha zveRetail Google Ad Performance:
Sidecar akafumura zvinotevera zvinhu zvakakanganisa mashandiro evatengesi mu2019:
Kuchinja kwebhajeti - Vatengesi vanogadzirisazve Google Ads vanoshandisa mu2019, vachikoshesa yakaderera-faneli basa paGoogle Shopping uye kudzoreredza yavo yakabhadharwa yekutsvaga mishandirapamwe yemari chengetedzo.
Chinonyanya kukosha - Vatengesi vakasimbisa kugona mukutsvaga kwakabhadharwa, muchidimbu nekudyara mumashambadziro asingadhuri emafoni, zvichitungamira kune yakafanana mari yekuwana gore pamusoro pegore.
Makwikwi kubva kuAmazon - Makwikwi aya akadzikisira Google Shopping mitengo yemitengo pamadhizaini, zvichimanikidza vatengesi kukwidza mari yavanoshandisa kuchengetedza kukura kwemari.
Kusimbisa zano revateereri - Vatengesi vakawedzera kutarisisa kwavo kune yakawanda granular vateereri yakanangana nemepu iri nani yeGoogle Ads kune ese matanho eiyo fanera yekutenga.
Kutarisa kusingazungunuke paGoogle - Vatengesi vakachengetedza mari kubva kuhurefu hweGoogle Ads papuratifomu, uye vari kutsvaga mamwe mapundutso kuburikidza neatsva mapuratifomu ekushambadzira, akadai seAmazon nePinterest.
Tichitarisa kumberi, Google ine chokwadi chekuenderera nekuumba yayo Google Ads chikuva kukwikwidza nekukura uye kukwikwidza kushambadzira mapuratifomu senge Facebook, Instagram, uye Amazon.
Kutsvaga Kwakakosha kweRetail Google Ads Benchmarks:
Vatengesi vakakwira kumakwikwi ekukwikwidza. Vatengesi vakakura zvakanyanya mukutsvaga kwakabhadharwa, vachichengetedza 8% pamitengo yegore kupfuura gore, vachityaira mari yakafanana. Vatengesi vakakwanisa kunongedza mari yeGoogle Shopping ne7% neyakaenzana 7% yekuwedzera mukushandisa.
Retailer kushambadzira kunoshandisa kuchinjiswa. Google Shopping yakagadzira 80% yemabhajeti evatengesi pakati penzira mbiri idzi, sezvo ichiita basa riri kukura mukushandura vatengi vepasi-fanera. Nepo kubhadharwa kwekutsvaga kwaive neakasara makumi maviri muzana emashandisiro, vatengesi vari kuswedera kushambadziro nehukuru hukuru kuti vakwanise kukwezva vatengi pamusoro penzvimbo.
Amazon yeGoogle Shopping yekuratidzira share yakadarika 60% yeiyo B2B, imba & imba, uye masheya evatengesi akanyatso kuQ3 2019. Kugovana kwemaAmazon share kwakaderera zvishoma muQ4, ichirega vatengesi vachidzosera kumwe kuratidzwa panguva yakaoma yegore.
YeAmazon's share share yakafamba zvishoma mukutsvaga kwakabhadharwa mu2019, ichitenderera kwakatenderedza 40% kana kudzikira kune vese vatengesi vakaongororwa. Vatengesi mune hutano & runako uye imba & ekumusoro kweimba vakaona maficha eAmazon achigovana nemazana manomwe kusvika masere muzana muzana muzvikamu zvavo pamusoro pegore ra7. Izvi zvakawanikwa zvinoratidza kuti kutsvaga kwakabhadharwa kunogona kuva chishandiso chakakosha kune vatengesi kuti vatarisane neAmazon nevamwe vakwikwidzi ' kuvapo pane yakabhadharwa SERP.
Prime Day inopa vatengesi mikana mitsva paGoogle Ads. Kukura kwegore-pamusoro-gore kwakaonekwa mukuonekwa uye pamari pamidziyo mukati mevhiki izere yePrime Day paGoogle Shopping. Zvekushambadzira kushambadzira pane nhare, pakanga paine gore-pamusoro-gore kukura pane kiyi KPIs (4% yekuodha, 6% yekukenya, uye 13% yemari). Pamusoro pezvo, yakabhadharwa yekutsvaga nhare kushambadzira yakaona yakakosha mibairo nekuwedzera kwe25% mumaodha uye 28% mugore remari pamusoro pegore.
Famba mushumo uzere uye iwe unogona kuwana maKPI kune yako chaiyo yekutengesa yakatarwa, kusanganisira makuru maitiro anokanganisa nzvimbo yekutengesa pamwe nezvakakurudzirwa naSidecar.
Dhawunirodha Sidecar's 2020 Benchmarks Report
Sidecar inopa kuita kwekushambadzira kugona kune vatengesi uye zvigadzirwa. Sidecar tekinoroji yepamberi nedata repfuma, inosanganisirwa nemakore ehunyanzvi hwekushambadzira hunyanzvi, batsira vatengi vayo kuvhura kugona kuzere kwekutsvagisa kwemazuva ano kune simba, zvitoro, zvemagariro, uye nzira dzemusika.
Tags: 2020Amazonzvipfeko adskuenzanisa infographicmushumo wekuenzanisamacomputer adsCOVID-19kurodha mushumozvipo kushambadzagoogle adsgoogle ads mune zvekutengesagoogle adwordsgoogle kutengahobby adsnharembozhayakabhadharwa kutsvagaPDFreal estate adschitoro chekutengesa bhenjichitoro google ads